बोटे जातिको विवाह तथा मृत्यु संस्कार
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बोटे जातिको जनसंख्या महिला ५ हजार ३ सय ७८ र पुरुष ५ हजार १९ जना गरी जम्मा १० हजार ३ सय ९७ जना रहेका छन् । २०४८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार महिला ३ हजार ३ सय जना र पुरुष ३ हजार ४ सय १८ जना गरी जम्मा ६ हजार ७ सय १८ जना थियो भने २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जम्मा ७ हजार ९ सय ६९ जना थियो ।
नेपालको सेती नदी किनार साथै काली गण्डकीको किनारतिर बढी बसोबास क्षेत्र रहेको बोटे जाति माझी जातिसँग संस्कृति मिल्दोजुल्दो रहेको पाइन्छ । माझी जातिको जस्तै यिनीहरुको पनि पेसा डुंगा चलाउने भएकोले पनि माझी जातिसँग एउटै काम मिलेको हुन सक्छ ।
नेपालमा भएको १ सय २५ जातिभित्र विवाह गर्ने फरक–फरक चलन रहेको पाइन्छ । जसअनुसार बोटे जातिको पनि आफ्नै प्रकारको र संस्कारहरु रहेको छ । प्रेम विवाह र मागी विवाह गर्ने बोटे जातिको परम्परागत चलनलाई ऐले पनि कायम राखेको देखिन्छ । गुरुङ, तामाङ र मगर जातिमा जस्तो फुपु र मामाको छोराछोरी बीचमा विवाह गर्ने चलन बोटे जातिमा पुरै निषेध गरिएको छ । बोटे जातिमा मागी विवाहलाई प्राथमिकता दिने भएकोले यिनीहरु मंगलबार र बुधबारलाई रोज्ने गर्दछ । जुन बारलाई उनीहरु ‘कारबारे’ भन्दछ । सायद अरु जातिमा यस्तो चलन छैन नै होला । बोटे जातिमा बेहुला बेहुली लिन घरबाट निस्कने बेलामा आमाको स्तनपान गरेर खुट्टामा पैसा राखेर ढोग्ने चलन रहेको छ ।
बोटे जातिमा कोही मानिसको मृत्यु हुन लाग्यो भने घरभित्र मर्न दिनु हुँदैन भन्ने परम्परागत चलन भएकोले हतार–हतार बिरामीलाई घर बाहिर निकाली आँगनमा राखेर सुनपानी ख्वाउने गर्दछन् । बोटे जातिमा लासलाई कहिल्यै पनि जलाउने गर्दैनन् । लासलाई सेतो कपडाले बाँसमा बाबियोको डोरीले बाँधेर नदी किनारमा लगेर गाड्ने गर्दछ । लास गाड्नु अघि छोराले दागबत्ती दिने गर्दछ । लासलाई घरबाट निकाली घाटतिर लैजाँदा र मलामीहरु घर फर्कँदा खेरी बाटोमा दाल, धानको चामल र धान एकै ठाउँ पारी छर्दै जाने र आउने गर्दछ । लास गाड्दा खेरी मृतकले ज्यूदो हुँदा प्रयोग गरेका सामानहरु र खाने चिज समेत पुरीदिने गर्दछन् । यदि उसले प्रयोग गरेका सामानहरु सँगै पुरीदिएन भने भूतप्रेत भएर सताउँछ भन्ने धारणा छ । किरिया बार्दा माछा मार्ने जालले बारेर बस्ने गर्दछन् । बोटे जातिबाहेक अन्य कुनै पनि जातिसँग बोल्ने र छोइनेसम्म गर्दैनन् । बोटे जातिमा किरिया बारेको बेलामा पनि जाँडरक्सी खाने चलन छ । तर, अरु बेला जस्तो जति पायो त्यत्ति, जहिले पायो त्यहिले खान पाइँदैन् । मात्र दिनभरिमा तीन दुनामात्र खान पाइन्छ । अच्चमको चलन छ, बोटे जातिमा । दिनभरि किरिया बार्नेहरु नदी किनारमा गएर बस्छन् र बेलुका भएपछि घर फर्कन्छन् । मान्छे मरेको चौथो दिनमा बोटे जातिमा केरा काटेर पकाउन राख्ने, एघारौं दिनमा मानो मिसाउने र तेहांै दिनमा किरिया बार्नेहरु कामबाट शुद्ध हुने गर्दछ । तर, बरखी चाहिँ दसैंको घटस्थापनाका दिन मात्र फुकाउने गर्दछ ।
बोटे जातिमा पितृको नाउँमा तीन वर्षसम्म कुखुराको भोग दिने चलन छ । सोह्र पुस्तासम्म पितृलाई श्राद्धमा पानी दिने चलन रहेको छ ।
प्रतिक्रियाका लागि : ९८५२६८१५८०
१. लेखक रामप्रकाश समथिङ, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय फिदिम, पाँचथर र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् पाँचथरद्वारा प्रकाशित– पाँचथरका आदिवासी जनजातिहरु जेष्ठ–२०६६
२. लेखक प्राज्ञ इन्द्रबहादुर गुरुङ, काशीपरी गुरुङद्वारा प्रकाशित तमु (गुरुङ) सांस्कृतिक दिग्दर्शन–असोज २०६८
३. लेखकद्वय ताम्ला उक्याव र श्याम अधिकारी, श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) स्थानीय विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति काठमाडौंद्वारा प्रकाशित नेपालका जनजातिहरु वैशाख–२०५७
४. लेखक मधुसुदन पाण्डेय, पैरबी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित नेपालका जनजातिहरु– २०६१
५. सम्पादक पवन चाम्लिङ ‘किरण’ निर्माण प्रकाशन गुम्पा घुर्पिसे, नाम्ची, दक्षिण सिक्किमद्वारा प्रकाशित वर्ष १९, अंक ३४—निर्माण संस्कृति विशेषाङ्क, अप्रिल– सन् १९९९
६. लेखक डा.हर्क गुरुङद्वारा लिखित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा प्रकाशित–जनजाति सेरोफेरो मे—२००६
(अर्को अंकमा दनुवार जातिबारे लेख प्रकाशन गरिनेछ ।)